EHTERAZ Apk Download 2022 Ho an'ny Android Qatar [COVID19 News]
March 7, 2022 Janoary 14, 2022 by John Smith
Ilay firenena voalohany izay nanangana tamin'ny fomba ofisialy ny fampiharana COVID-19 Coronavirus Android antsoina hoe EHTERAZ Apk. Ity fampiharana ity dia manome ireo fanavaozam-baovao farany mikasika ny Coronavirus ary izy no apetraka tena atokisan'ny Minisiteran'ny Atitany Qatar.
Mba hampandehanana izany App momba ny areti-mifindra, mila misoratra anarana aloha ianao. Raha te hisoratra anarana amin'ity app ity ianao dia mila laharana finday Qatari. Midika izany raha tsy nasionalista Qatar ianao dia tsy hamela anao handray ny fanavaozana Coronavirus ity fampiharana ity.
Raha te hahazo fanavaozana momba ny Coronavirus ianao fa mila Qatari Nationalist.
Momba ny EHTERAZ Qatar
EHTERAZ App dia novolavolain'ny Ministeran'ny atitany ao Qatar mba hampahafantarana ny mponin'ny Qatari Community momba ny fanavaozana farany an'ny COVID-19 Coronavirus. Na ity fampiharana ity aza dia ampiasain'ny ministeran'ny atitany Qatar hanaparitahana vaovao sy fahatsapan-tena eo amin'ny vahoakany.
Amin'ny alàlan'ity fampiharana ity dia tsy manaparitaka vaovao fotsiny izy ireo fa manome soso-kevitra samihafa ihany koa hanalavitra ny vahoaka ao amin'ny Coronavirus. Asao ihany koa izy ireo hitafy saron-tava, fonon-tanana sy mampiasa sanitera tsara mba hiaro tena amin'ny aretin'ny valanaretina.
Ankoatr'izay, ny fampiharana dia natao amin'ny fomba toy izany manome ny tena tarehimarika misy fampahalalana marina. Ohatra, raha misy olona iray mivezivezy amina tanàna iray any Qatar mankany amin'ny tanàna iray manana olona maro mahomby. Ary ilay olona tsy mahalala ny zava-misy ankehitriny ao.
Mba hahazoana ny vaovao farany, ny tokony hataony dia ny fanokafana fotsiny ny toeran'ny toerana misy anao. Ampahafantarinao azy ireo mikasika ny isan'ny olona tratran'ny Coronavirus ao amin'io tanàna manokana io ary azo antoka fa mijanona ao.
Ny EHTERAZ Apk vao haingana dia navoaka teo an-tsena. Ny tena niahy an'io fanavaozana io dia ny tsiambaratelo sy ny filaminana.
Ny dikan-takelaka taloha dia misy loopholes amin'ny fizarana tsiambaratelo sy fiarovana izay mahatonga azy ho marefo. Mba hamahana ireo olana ireo dia nanapa-kevitra ny Minisiteran'ny Atitany ny famoahana dikanteny nohavaozina hitranga amin'ity resaka fiarovana sy tsiambaratelo ity.
Ny antsipirian'ny Apk
Android takiana 4.0 sy ambony
Ity fampiharana ity dia natao hampahafantarana ny mponin'ny Qatar hahafantatra ny zava-misy iainan'ny toerana tsirairay ary maneho ny tena tarehin'ireo olona voarindra.
Ity andiany farany ity dia manana endri-javatra marobe ary tsy azo atao ny manonona an'ireo lafiny rehetra ireo eto. Eto ambany izahay dia nilaza ny sasany amin'ireo endri-javatra fototra toy
Maimaimpoana io fampiharana io ary tsy mila karazana famandrihana hiditra ny angon-drakitra ianao.
Ny app dia manana counter counter raha hizara ireo fanavaozana farany indrindra COVID-19 Coronavirus.
Nanampy GPS ny manam-pahaizana mba hampisehoana amin'ny olona ny tena tarehin'ny olona mahomby ao amin'io faritra manokana io.
Manana ity counter video ity izy ireo izay misy ny fomba samihafa nozahana mba hialana amin'ny Coronavirus.
Mitombo ny isan'ny tena iharan'izany, ary havaozina araka izany ny mpifaninana.
Pikantsarin'ny EHTERAZ App
Ahoana ny fomba fampidinana sy fampiasana EHTERAZ App
Manana ny fidirana feno amin'ny andiany farany amin'ity rakitra apk ity amin'ny tranokalanay izahay. Ny hany ilainao dia tsindrio fotsiny ny bokotra download izay omena eo amin'ny farany ambony sy ambany amin'ny lahatsoratra. Miandrasa segondra segondra ary hanomboka mandeha ho azy ny fisavana.
Rehefa vita ny fampidinana anao dia tadiavo izao ny rakitra apk izay alaina ary tsindrio ny bokotra fametrahana hanombohana ny dingana fametrahana ao anatin'ny fitaovanao. Andraso kely ary hahazo fampandrenesana vita ianao.
Sokafy izao ny EHTERAZ App ary hampiseho ireo pejy sy feno fitsipika sy fitsipika ity. Ny sisa azonao atao dia tsindrio fotsiny ny bokotra ifanarahana, mba hahafahanao mandroso amin'ny dingana manaraka. Amin'ny dingana manaraka dia mila manome ny fanomezan-kao manokanao ianao anisan'izany ny isa manokana.
Vantany vao niditra ny fahazoan-dàlana ilaina ianao fa tsy hampiditra anao avy hatrany. Ankehitriny ianao manana fahazoana vaovao farany farany momba ny COVID-19 Coronavirus.
Antenaiko fa hanampy ity lahatsoratra ity ary raha te hisintona rindranasa bebe kokoa ianao. Avy eo mitsangatsangana tsindraindray ny tranokalanay satria manavao sy manome ny fileon-tsary farany izahay isan'andro. Raha tianao ity lahatsoratra ity dia zarao amin'ny namanao ary aza hadino ny hanamarika ny tranokalanay.
Sokajy Apps, Fahasalamana & Fitness Tags EHTERAZ, EHTERAZ Apk, App EHTERAZ, App momba ny areti-mifindra Post Fikarohana
CINA Live Apk 2022 Download ho an'ny Android [Nohavaozina]
Ampidino ny Libre VIP Apk ho an'ny Android [Nohavaozina 2022]